Matongerwo eNyika, 30 Ndira 2019
Chitatu 30 Ndira 2019
Mapato Madiki Oronga Kuita Nhaurirano neZanu PF neMDC yaVaChamisa
Mapato madiki matatu anopikisa asangana muHarare akabuda nechisungo chekutanga kutaudzana nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nemutungamiri webato guru rinopikisa, VaNelson Chamisa, kuitira kuti paitwe nhaurirano munyika.
Nyaya yeMapurisa neMasoja Ari Kurova Vanhu Inotsviriridza Muparamende
Mumiriri weHarare East muNational Assembly, VaTendai Biti, veMDC ndivo vabvunza VaZiyambi kuti ndiwo wave mutemo here wehurumende kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedza bumbiro remitemo yenyika sezvo mauto nemapurisa ari kutyora kodzero dzevanhu.
Amai Mutsvangwa Vokurudzira Vakabatwa Chibharo Kuti Vamhang'are
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vakurudzira madzimai ose ari kupomera mauto kana mapurisa mhosva yekuvabata chibharo kuti vamhang’are nyaya idzi kumapurisa kana kumasangano akazvimirira.
Mamwe Mapato Anopikisa Osangana Pamusoro Pekuti Munyika Muitwe Nhaurirano
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC-T, VaObert Gutu vanoti vamiriri vemapato matatu aya vachange vachizoitawo musangano nevatori venhau vachipawo maonero avo pamusoro penyaya nenhaurirano iyi.
Magweta Anoratidzira Achiti Haasi Kufara neKutyorwa kweKodzero dzeVasungwa
Magweta aratidzira muHarare nhasi achinyunyuta nekwaanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevasungwa pamwe nekutyorwa kwebumbiro remitemo yenyika.
VaChamisa Vokurudzira Dzimwe Nyika Kupindira Munyaya yeZimbabwe
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, nhasi vakumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa nemapurisa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika.
Paramende Yovhurwa Nhengo dzeMDC Dzichiti Hadzina Chokwadi Kuti Dzichapinda Here
Paramende iri kuvhurwa neChipiri asi vanokokera nhengo dzebato reMDC mudare, VaProsper Mutseyami, vanoti havasi kuziva kuti nhengo dzavo dzichakwanisa kupinda mudare iri here kana kuti kwete sezvo vamwe vakasungwa uye vakawanda vachitsvagwa nemapurisa.
VaMthuli Ncube Voparura Bhajeti neMusi weChina
Vashandi veKanzuru yeHarare Vanoti Havachakwanisa Kuramba Vachienda kuMabasa
Vanhu Vanotadza Kutora Mari Dzavo Mumabhanga muChinhoyi
Vanhu Vanokwanisa Kutora Mari Dzavo Mumabhanga muHarare